Paịlet Agbaa Mbọ Ka A Hapụ Jizọs | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Norwegian Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
MATIU 27:15-17, 20-30 MAK 15:6-19 LUK 23:18-25 JỌN 18:39–19:5
PAỊLET AGBAA MBỌ KA A HAPỤ JIZỌS
NDỊ JUU EKWUO KA A HAPỤRỤ HA BARABAS
NDỊ AGHA EJIRI JIZỌS MEE IHE ỌCHỊ MA PỊA YA IHE
Paịlet gwara ìgwè mmadụ chọrọ ka e gbuo Jizọs, sị: “Ahụghị m ihe ọ bụla nwoke a mere nke gosiri na ebubo ndị unu na-ebo ya bụ eziokwu. N’eziokwu, Herọd ahụghịkwa.” (Luk 23:14, 15) Paịlet gbalịrị isi ụzọ ọzọ hapụ Jizọs. Ọ gwara ìgwè mmadụ ahụ, sị: “Unu nwekwara omenala na m ga-ahapụrụ unu otu onye n’oge ememme ngabiga. Ya mere, ùnu chọrọ ka m hapụrụ unu eze ndị Juu?”—Jọn 18:39.
Paịlet ma na e nwere onye mkpọrọ aha ya bụ Barabas. Barabas bụ onye ohi, onye na-emegide ndị ọchịchị, nakwa ogbu ọchụ. Paịlet jụrụ ndị Juu, sị: “Olee onye unu chọrọ ka m hapụrụ unu, ọ̀ bụ Barabas ka ọ̀ bụ Jizọs, onye a sịrị na ọ bụ Kraịst?” Ndị isi nchụàjà mere ka ìgwè mmadụ ahụ kwuo ka a hapụrụ ha Barabas kama ịhapụrụ ha Jizọs. Paịlet jụrụ ha ọzọ, sị: “Ònye n’ime ha abụọ ka unu chọrọ ka m hapụrụ unu?” Ha wee sị: “Ọ bụ Barabas”!—Matiu 27:17, 21.
Ihe a ha kwuru wutere Paịlet, ya ajụọ ha, sị: “Gịnịzi ka m ga-eme Jizọs, onye a sịrị na ọ bụ Kraịst?” Ha niile wee sị ya: “Ka a kpọgide ya n’osisi!” (Matiu 27:22) Ihere anaghị eme ha ikwu ka e gbuo nwoke aka ya dị ọcha. Paịlet jụrụ ha, sị: “N’ihi gịnị, olee ihe ọjọọ nwoke a mere? Ahụghị m ihe ọ bụla o mere nke ga-eme ka e gbuo ya; ya mere, m ga-apịa ya ihe ma hapụ ya.”—Luk 23:22.
N’agbanyeghị mbọ niile Paịlet gbara ka a hapụ Jizọs, ìgwè mmadụ ahụ iwe ji nọgidere na-eti mkpu, sị: “Ka a kpọgide ya n’osisi!” (Matiu 27:23) Ndị ndú okpukpe ahụ emeela ka ìgwè mmadụ ahụ mewe ara ara nke na ha chọrọ ka a wụfuo ọbara mmadụ. Ọ bụkwanụghị ọbara onye omekome ma ọ bụ onye gburu ọchụ. Kama, ọ bụ ọbara nwoke aka ya dị ọcha, bụ́ onye ha nabatara na Jeruselem ka Eze ụbọchị ise tupu mgbe ahụ. Ọ bụrụ na ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ mgbe ihe ndị a na-eme, ha ekwughị okwu ma ọ bụ pụta ka a hụ ha.
Mgbe Paịlet hụrụ na mbọ ọ na-agba enweghị isi, hụkwa na ụzụ na-arị ibe ya elu, o weere mmiri kwọọ aka ya n’ihu ìgwè mmadụ ahụ. Ọ gwara ha, sị: “Aka m dị ọcha n’ebe ọbara nwoke a dị. Unu onwe unu aghaghị ịhụ maka ya.” Ma ihe a o kwuru emeghị ka ìgwè mmadụ ahụ gbanwee obi ha. Kama, ha kwuru, sị: “Ka ọbara ya dị n’isi anyị, dịkwa n’isi ụmụ anyị.”—Matiu 27:24, 25.
Gọvanọ ahụ chọrọ ime ihe ga-adị ha mma, karịa ime ihe ọ maara ziri ezi. N’ihi ya, o mere ihe ìgwè mmadụ ahụ chọrọ, hapụrụ ha Barabas. O mere ka e yipụ Jizọs uwe ma pịa ya ihe.
Mgbe ndị agha ahụ pịakasịchara Jizọs ahụ́, ha kpọọrọ ya banye n’obí gọvanọ ma jiri ogwu kpaa okpueze, kpuwe ya n’isi. Ha nyekwara ya okporo ahịhịa amị ma ọ bụ osisi n’aka nri ya ma yiwe ya uwe na-acha odo odo, bụ́ ụdị uwe ndị eze na-eyi. Ha ji ya mee ihe ọchị, sị: “Ndeewo, gị Eze ndị Juu!” (Matiu 27:28, 29) Ha bụrụ Jizọs ọnụ mmiri n’ihu ma maa ya ụra. Ha naara ya osisi ahụ, jiri ya na-akụ ya n’isi. Nke a mere ka ogwu ndị dị n’okpu ahụ bamie ya n’isi.
Otú Jizọs si nọrọ nwayọọ ma jide onwe ya n’ihe a niile a na-eme ya masịrị Paịlet nke na ọ gbalịrị ọzọ ịgbụrụ isi ya. Ọ sịrị: “Lee! M na-akpọpụtara unu ya n’èzí ka unu wee mara na o nweghị ihe ọjọọ m hụrụ o mere.” O nwere ike ịbụ na Paịlet chere na ọ kpọpụta Jizọs ugbu a e merụchara ya ahụ́, ahụ́ ya ana-agba ọbara, na ìgwè mmadụ ahụ ga-agbanwe obi ha. Ka Jizọs guzo n’ihu ìgwè mmadụ ahụ obi fere azụ, Paịlet kwuru, sị: “Lee nwoke ahụ!”—Jọn 19:4, 5.
N’agbanyeghị na a pịakasịchaala Jizọs ahụ́, ọ nọrọ nwayọọ ma jide onwe ya. Paịlet chọpụtadịrị nke a n’ihi na okwu ya yiri ka ọ̀ na-egosi na ọ na-akwanyere Jizọs ùgwù ma na-emetere ya ebere.
ỊPỊA MMADỤ IHE
Otu dọkịta aha ya bụ William D. Edwards kwuru otú ndị Rom si apịa mmadụ ihe n’akwụkwọ bụ́ The Journal of the American Medical Association. Ọ sịrị:
“Ihe a na-ejikarị apịa mmadụ ihe bụ ụtarị dị mkpirikpi . . . nke nwere ọtụtụ eriri akpụkpọ anụ nọ otu otu ma ọ bụ ndị a kpara akpa. Ogologo ha na-adị iche iche. E tinyegasịrị mkpụrụ ígwè ma ọ bụ iberibe ọkpụkpụ atụrụ ndị dị nkọ n’ala ala ụtarị ahụ. . . . Ka ndị agha Rom ji ike ha niile na-apịa mmadụ ihe ahụ n’azụ ugboro ugboro, mkpụrụ ígwè ndị ahụ na-emerụ onye ahụ ezigbo ahụ́. Eriri akpụkpọ anụ ahụ na ọkpụkpụ atụrụ ndị ahụ na-abanye ya n’ime ahụ́. Ka a na-apịa onye ahụ ihe, ụtarị ahụ na-abanye ya n’uru ahụ́ ma na-adọpụtasị iberibe anụ ahụ́ ndị na-agba ọbara.”
Ka Paịlet nwee ike ịgbụrụ isi ya, olee mbọ ọ gbara ka a hapụ Jizọs?
Olee otú ndị Rom si apịa mmadụ ihe?
Gịnị ka ndị agha Rom mere Jizọs mgbe ha pịachara ya ihe?